चतराधाममा तारकब्रह्म महायज्ञ राष्ट्रकै गौरवः राष्ट्रपति भण्डारी | suryakhabar.com
राजदूतसहितका उच्च अधिकारी फिर्ता पठाउने र व्यापार स्थगन गर्ने पाकिस्तानको घोषणा
अब हामीलाई बिधेयक पास भएपछि कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुला भयोः मुख्यमन्त्री राउत
Home आर्थिक चतराधाममा तारकब्रह्म महायज्ञ राष्ट्रकै गौरवः राष्ट्रपति भण्डारी
चतराधाममा तारकब्रह्म महायज्ञ राष्ट्रकै गौरवः राष्ट्रपति भण्डारी
on: February 09, 2019 In: आर्थिकTags: No Comments
धरान । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुनसरीको वराहक्षेत्रको प्राचीन हरिद्वार चतराधाममा श्रीराम तारकब्रह्म महायज्ञको उद्घाटन गरेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले आज दिउँसो रामानन्द सेवापीठले निर्माण गरेका १२८ कोठे नव निर्मित श्रीराम निकेतन, लक्ष्मण निलियम र जानकी सदनको समेत उद्घाटन गरिन् ।
महायज्ञको उद्घाटन कार्यक्रममा उनले नेपालमा पहिलो पटक भएको तारकब्रह्म महायज्ञ राष्ट्रकै गौरव भएको बताईन् । उनले बराहक्षेत्र मुलुकै उत्कृष्ट धार्मिक गन्तव्य भएको र रामनन्द सेवापीठको सक्रियतामा भएको महायज्ञ कार्यक्रमले यहाँको गरिमा बढाएको समेत बताईन् । “यहाँ जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र बनाएर नेपाललाई चाहिने औषधी आफैँ बनाउन सकिन्छ ”, राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन् । त्यससँगै उहाँले यज्ञ मण्डपको पूजा अर्चना, अवलोकन गरिन् ।
कार्यक्रममा प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बराहक्षेत्र प्रदेश नं १ को प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य भएकोले यसका लागि प्रदेश सरकारले पनि लगानी गर्न लागेको बताईन् । महायज्ञमा शुक्रबार नै भारतको अयोध्या र उत्तरकाशी लगायतका स्थानबाट सात जना जगद्गुरु, पीठाधीस र महामण्डलेश्वर चतराधाम आएको आयोजनकले जनाएको छ । १४ करोडको लागतमा आयोजना भइरहेको महायज्ञको समापन यज्ञ पूर्णहुति फागुन ७ गते हुने जनाइएको छ ।
रामानन्द सेवापीठका पिठाधिस महायोगी डा कृष्णदास महाराजका अनुसार हिन्दू अध्यात्मअनुसार तारकब्रम्ह मन्त्र जप गरेर गरिने होम नै तारकब्रम्ह महायज्ञ हो । यो मन्त्र पौराणिक कालमा देवताले जप गर्ने गर्दथे । पछि पृथ्वी जगतको कल्याणका लागि ठूला महाराजाले यो यज्ञ लगाउने गरेका थिए । यो मन्त्रको जप गरेर होम गर्दा उत्पन्न धुवाँबाट एक पटकमा १०८ प्रकारका ‘साइकोन’ उत्पन्न हुने र त्यसले वायुमण्डललाई शुद्ध बनाउने काम गर्दछ ।
डा कृष्ण दासका अनुसार तारकब्रम्ह यज्ञ नेपालमा पहिलो पटक र विश्वमा ७०५ वर्षपछि हुन लागेको हो । आयोजकले यहाँको हुनमान मन्दिर परिसरमा ११ तले कलात्मक हवनकुण्ड निर्माण गरेको छ ।
हवनका लागि विभिन्न १०८ प्रकारका हवनकुण्ड बनाइएका छन् । यही कुण्डमा एक हजार २०० साधकले १६ करोड हवानाचार्यसहित एक अर्ब ६० करोड पटक ‘तारकब्रम्ह मन्त्र’ जप गर्ने छन् । उक्त महायज्ञमा देश विदेशका प्रकाण्ड आत्यात्मिक विद्वानसहित योग साधकदेखि सयौँ योगाचार्य र धार्मिक प्रवक्ताको सहभागिता हुने डा दासले जानकारी दिए ।
काँग्रेस महासमिति बैठकका निर्णय केन्द्रीय समितिमा छलफल हुनु हास्यास्पदः जिल्ला सभापतिहरु
पुर्ब प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य देशलाई मायागर्ने ब्यक्ती हुनुहुन्थ्योः राजदूत आचार्य
गुणस्तरबमोजिम सिमेन्ट उत्पादन नगर्ने चार उद्योगलाई कारवाही
काठमाडौंको नैकापमा सन्राइज बैंकको ११६ औं शाखा संचालनमा
प्राइम कमर्सियल बैंकको बिशेष साधारण सभा सम्पन्न
बागलुङका बिरामीलाई पोर्चुगलबाट सहयोग
शिकार खेलेर नफर्किएका राउटे तीन महीनादेखि बेपत्ता
दुईवटा श्रीमती ल्यााउने दुई जोडी अन्ततः यसरी परे प्रहरीको फन्दामा
डा खड्काको आक्रोस्ः देश रोईरहेकाबेला स्वीमिङपुलको कुरा गर्न सुहाउछ? कम्युनिष्ट सरकारसँग मानवता हुदैन ?
मध्यरातमा कोशी पुलका ५६ वटै ढोका खुल्यो, ओली सरकारले गर्यो ऐतिहाशिक काम
अध्यक्ष राणालाई काँग्रेस भित्र्याउदै नेता सिंह भन्छन्ः सरकारले बाढीपहिरो पीडितको उद्दारमा काम गर्न सकेन
रुद्रसेन बिश्वकर्माको धमाकेदार मैथिली गित ‘कलियुग के खेल’ सार्वजनिक
नेपालमा पहिलो पटक प्रयोग गरिएको गीत काँचुलीमा (भिडियोसहित)
सुरज र प्रतिक्षाको तीज गीत ‘टिनको वाकस’
दक्षिण कोरीयामा चलचित्र ए मेरो हजुर तीनको उत्साहपुर्ण ब्यापार
‘मिस्टर वल्र्ड’मा भाग लिन रायमाझी फिलिफिन्स् जाने, नेपालीका लागि गौरव
डेङ्गुका विषयमा भ्रम धेरै फैलिएको चिकित्सकले जनाए
डेङ्गुको उपचारमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण
स्वास्थ्य बीमा गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि
२६ माघ २०७५, शनिबार